XFCE 4.16 usoro mmepe malitere | Site na Linux
XFCE 4.16 usoro mmepe malitere
Ọchịchịrị | | Emelitere na 21/10/2019 01:30 | Noticias
Ternyaahụ E wepụtara ndị mmepe desktọọpụ XFCE site na nkwuputa mmecha nke usoro atụmatụ na ndị ịdabere na oyi na ịnyefe ọrụ ahụ na ọkwa mmepe nke ihe ga-abu ohuru nke XFCE 4.16.
A na-ezube mmepe iji mechaa n'etiti afọ na-esote, mgbe nke a gasịrị ọ ga-anọgide na-etolite atọ mbido mbụ tupu mwepụta ikpeazụ. Nke mgbanwe ndi ozo, ọ na-akara njedebe nke nkwado nhọrọ maka GTK2 na imezi ọhụhụ nke njirimara onye ọrụ.
Ebe ọ bụ N'oge usoro mmepe nke nsụgharị 4.14, ndị mmepe gbalịrị ịbubata gburugburu GTK2 ka GTK3 na-enweghị agbanwe agbanwe interfacemgbe maka XFCE 4.16 ha na-ekwu na ezuo imechi nkwado GTK2 ma were GTK3 zuru oke, na mgbakwunye na ọrụ ahụ ga-amalite ịkwalite ọdịdị nke ogwe.
Dịka ekwere na nkwa, anyị ga-anwa ịdebe usoro oge ugbu a karị, yabụ na-ebuteghị oge: mmepe amalitela Xfce 4.16 amalitela n'ihu ọha!
N'oge ọrụ nke ọrụ a, a ga-enwe nkwado maka icho mma windo n'akụkụ ndị ahịa (CSD,) nke na-ejighi njikwa window adọta aha windo na okpokoro, mana site na ngwa ahụ n'onwe ya. A na-eme atụmatụ iji CSD iji mepụta nkụnye eji isi mee ọtụtụ ihe na okpokolo agba zoro ezo na igbe okwu metụtara mgbanwe ntọala.
Icfọdụ akara ngosi mmanya, olee otú imechi windo, ga-eji dochie anya ihe atụ nke ahụ yikarịrị ka ọ dị mma mgbe ị na-ahọrọ isiokwu gbara ọchịchịrị. A ga-agbakwunye nkwado maka igosipụta "Omume Desktọpụ" na nchịkọta nhọrọ nke ngwa mgbakwunye yana ntinye nke ụzọ mkpirisi maka ịmalite ngwa, na-enye ohere ịmalite ndị ọkwọ ụgbọ ala akọwapụtara ngwa ngwa, dịka ịmepe windo Firefox ọzọ.
Anyị ga-ejikwa ihe ịchọ mma ndị ahịa na-egwuri egwu ebe anyị chere na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya (dịka ọmụmaatụ, dochie oku XfceTitledDialog, nke ejiri ya maka mkparịta ụka nhazi niile na ụdị isi nke HeaderBar).
A ga-agbakwunye ọba akwụkwọ libgtop na ọnụọgụ ndị dabere, nke a ga-eji gosipụta ozi gbasara sistemụ na mkparịta ụka "Ihe".
A naghị atụ anya mgbanwe siri ike maka faili faili Thunar na interface, ma ọtụtụ obere ndozi na-zubere ka mfe-arụ ọrụ na faịlụ. Ọhụrụ Thunar ị kwesịrị ịnwe ọhụụ ọhụrụ na ngwa mgbakwunye API, na-enye gị ohere itinye omume ọhụrụ ma chekwaa ndekọ nlele ndekọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume ịchekwa ụdị ọnọdụ ụdị dabere na ndekọ aha onye ọ bụla.
A na-ezubekwa ya iji tinye na nhazi ahụ ka ọ gbasaa ozi mmepụta enyo na ọtụtụ ndị nlekota, onye mkpebi ya dị iche.
Ijikwa mmeputakwa agba, na-eme atụmatụ ịkwadebe usoro ndabere gị iji na-acha na agba, na-enweghị na-agba ọsọ xiccd. Na njikwa njikwa ike, a na-atụ anya ka ọnọdụ azụ ọkụ abalị pụta dị ka arụ ọrụ oge na-etinye dị ka nyocha ihuenyo iji belata nsogbu na anya.
Ọzọkwa na aka nke ọzọ, ndị mmepe ezubela XFCE 4.16 iji tinye ụfọdụ ogwe mgbakwunye ngwa mgbakwunye nke mgbasa ozi na-egosi ihe na-agbakwunye ọnọdụ ọchịchịrịyana gụnyere histogram batrị na dialogi nhazi iji lelee mmebi batrị na ntinye nke interface iji soro na-ewepụ batrị.
Dị ka e kwuru n'elu, a na-ezube usoro a ka ọ dị mfe iji nye anyị ohere "ịrapara na atụmatụ" ma nweta nsụgharị maka isi ọrụ anyị tupu oge abụọ gara aga.
N'ikpeazụ ee Ha nwere mmasị ịmatakwu banyere yama ọ bụ banyere ọkwa na ọkwa na-esote banyere gburugburu desktọọpụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » XFCE 4.16 usoro mmepe malitere
Ozi ọma, ọmarịcha!
Ntopng: Ezigbo usoro ntanetị ntanetị na ntanetị
Ubuntu Mate 19.10 bịarutere Kernel 5.3, Mate 1.22.2, ọrụ ọhụụ na ndị ọzọ